Ethiopia: Ra’iisul Wasaaraha Cusub ee itoobiya oo booqasho ku tagay Tigray. | ogaden24
Ethiopia: Ra’iisul Wasaaraha Cusub ee itoobiya oo booqasho ku tagay Tigray.
Apr 13, 2018 - Aragtiyood
Raysul wasaaraha cusub ee Itoobiya, ayaa gaaray magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya, si uu u soo dhaweeyo.
Isagoo la hadlaayay dad badan oo isugu soo ururay Village of Martyrs ‘Village, ra’iisul-wasaare Abi Axmed Cali, oo ka soo jeeda Oromiya, ayaa ku hadlay luqadda Tigrigna si uu isugu soo ururiyo farxad.
“Dadka reer Tigray, oo ay weheliyaan dadka ku nool gobollada kale, waxay u dagaallamayeen diidmada dimuqraadiyadda ee Itoobiya,” ayuu yiri.
Waxa uu sheegay in gobolka Tigray uu ahaa xarun xasaasi ah oo ka mid ah ilbaxnimada qadiimiga ah, falsafada, farshaxanka, muusiga, iyo diinta. “Waa wax aan macquul aheyn in laga fikiro Itoobiya oo aan lahayn Tigray, oo ay weheliyaan dadka Itoobiyaanka ah ee kale, waxay difaaceen midnimada Itoobiya.”
Cali wuxuu xusay in dadka reer Tigray ay ka horjoogsadeen halganka hubeysan ee ka dhanka ah xukunkii hore ee Dergire, oo sameeyay waxyaabo fara badan oo keeney in la dhiso nidaam dastuuri ah dalka.
Waxaa si weyn loo rajeynayaa in ra’iisul wasaaraha cusub, oo ka soo jeeda Oromia, uu hagaajin doono qaabka awoodda leh iyada oo la siinayo xukuumadda, ciidanka, iyo sir-doonka oo loo wada dhan yahay oo caafimaad qaba.
Report.. Sokeeye Hussein Abdi